के तपाईको खुट्टा निदाउने, गन्हाउने र दुख्ने गर्छ ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस् र सजिलै छुटकारा पाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
खुट्टाको स्याहार :
खाने सोडाको प्रयोग :
जुत्ता ओभानोरसुख्खा पारेर लाउनेः
सूतीको मोजाको प्रयोग :
खुट्टा सुख्खा राख्ने :
अदुवाको प्रयोग :
भिनेगरको मिश्रणमा डुबाउने :
चियाले खुट्टा पखाल्ने :
चप्पलको प्रयोग :
– खुट्टाको दुखाइ, जलन, सुजन कम गर्न केही समय तातोपानीमा खुट्टा डुबाउने । अझ प्रभावकारी फाइदा लिन फिट्किरी वा एप्पल साइडर भेनेगरलाई पानीमा मिसाउने ।
Don't Miss it सनग्लास लगाउन मन पर्छ कि पर्दैन ? मन नपरे पनि लगाउने गर्नुहोस् – यस्ता रोग लाग्न बाट बच्नुहुनेछ
Up Next के तपाई फ्रिजमा राखेको पानी सिधै पिउने गर्नुहुन्छ ? सावधान ! तपाई यस्तो खतरनाक समस्याको शिकार बन्नुहुदैछ